FJKM Ampahibato Firaisana: I Ndrema sy Fara nandavaka ny sisin-dàlana
FJKM Ampahibato Firaisana : Dimy minitra Mpandavaka lalana
I Ndrema sy Fara nandavaka ny sisin-dàlana
Indray andro rankizy dia nisy ankizy mianadahy niasa teo amin'ny sisin'ny arabe anankiray. I Ndrema izay zokiny dia mitondra angady kely, ary mangady ny sisin-dalana no ataony, ary apetrany eo akaikin'ilay lavaka kely eo ihany ny tany noloarany. Rehefa mahavita lavaka iray izy dia mifindra eo akaiky eo ary manao toy izany ihany. I Fara kosa, miaraka amin'ny siny fanondrahana misy rano, dia manototra an'ilay tany avy nolavahan'i Ndrema ary mandena kely an'izany.
Tsy naharitra ity mpandalo anankiray ka nanontany izay zavatra ataon'izy mianadahy teo.
"Mamboly hazo ety amin'ny sisin-dàlana izahay tompoko", hoy i Ndrema. "Izaho no mpandavaka, misy zandriko izay, i Naivo no anarany, izy no mpanatsatoka ny zana-kazo ao anatin'ny lavaka, ary i Fara kosa manototra ny lavaka sy manondraka an'ilay zana-kazo. Fa androany tsy tonga niasa i Naivo fa kamo dia izahay mianadahy no samy manao ny anjara tandrify anay eto".
Toko telo mahamasa-nahandro toy izany rankizy ny fianarana Sekoly Alahady. Ny Mpampianatra Sekoly alahady, ny mpianatra Sekoly Alahady ary ny Fanahy Masina. Raha misy tsy tonga ny anankiray amin'ireo dia tsy hamokatra velively ny asa, ary rera-maina izay miasa. Koa amin'ny fotoana rehetra izay tsy andehanantsika mianatra Sekoly Alahady, mety noho ny hakamoana na antony hafa, dia alaivo sary an-tsaina any amin'izay toerana misy anareo hoe miasa maina tsy hisy vokany toa an'i Ndrema sy Fara any izay ny Mpampianatra Sekoly Alahady.
Tena fiaraha-miasa tokoa io fianarana Sekoly Alahady io, koa manomboka izao aza mba kamokamo toa an'i Naivo intsony mihitsy. Raha tia an'Andriamanitra isika, dia aoka ho mpiara-miasa mahatoky, "Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tia an’ Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo." Romana 8:28.